Xena Zen Aom (Amour) : « Tsy misy na iza na iza manana alalana hanimba ny fonao !» – Blaogin'i Voniary
Rakotomalala Hasina Prudencia Amour no tena anarany. Xena Zen Aom na Amour kosa no ahalalan’ny maro azy eo amin’ny sehatry ny tambajotra sôsialy sy ny tontolon’ny Kung Fu ary ny fampivoaran-tena. Tao amin’ny Facebook indrindra no nahafantarako azy tamin’ny alalan’ny fizarana torohevitra maro momba ny fampivoaran-tena ataony saika isan’andro. Olona be tsikitsiky hatrany izy amin’ny sariny ary milaza zavatra miabo foana any anatin’ny rantiny. Rehefa nihaona nivantana taminy aho dia tena izay tokoa no hitako. Fifaliana, fahavitrihana ary fahasambarana mandehandeha raha i Amour. Rehefa miresaka aminy dia tsapa avy hatrany hoe olona milona ao anatin’ny tontolon’ny fampivoaran-tena sy fivelarana ara-panahy izy ary tena hita taratra amin’ny fihetsiny sy ny toe-piainany rehetra izany. Anisany olona nampiaiky volana ahy hoe tsy resabe na lesona manidina fotsiny ireny zavatra hita any anaty boky fampivoaran-tena ireny fa tena mandaitra sy mitondra vokatsoa eo amin’ny fiainana rehefa tena ampiharina. Averimberin’i Amour rahateo foana matetika hoe « ny fampivoaran-tena dia fiainana ».
Vao namoaka boky, miompana amin’ny fampivoaran-tena mazava ho azy, nampitondrainy ny lohateny hoe « Izay voleko no hotazako » izy. Horesahiko aminao manaraka ny mikasika azy io, fa anio aloha andao fantarintsika i Xena Zen Aom sy ny fiainany.
Voniary (V) : Efa olona mitsikitsiky lava sy be resaka toy izao foana ve ianao hatramin’izay ?
Xena Zen Aom (XZA) : Tena olona tompon’ny hasarotan-kenatra aho taloha ! Na ao an-trano aza, tsy mba maneho hevitra izany mihitsy aho. Izaho ilay manaiky foana ny hevitry ny maro eo na tiako na tsy tiako. Hitako anefa rehefa ela ny ela fa mampisy vesatra sy ratra anaty izany.
Nisy fotoana amin’izay aho nandray fanapahan-kevitra hoe : manomboka izao, tsy misy na iza na iza manana alalana manambany ahy sy manimba ny foko. Dia teo aho no nanomboka tena nivelatra.
V : Mba lazalazao anay ary hoe nanao ahoana ny fahazazanao sy ilay ianao taloha?
XZA : Dimy mianadahy izahay ary vavy tokana aho. Vokatr’izany lasa nitomban-dahy aho, tsy dia nahafantatra loatra ny tontolon’ny vehivavy. Ny kilalaoko dia izay an’ny anadahiko ihany no nolalaoviko. Ny namana, tsy nanana namana vehivavy firy aho. Na izany resaka fitiavana izany aza tsy fantatro fa noheveriko hoe tsy maintsy manambady, tsy maintsy manana tokantrano dia mila manan-janaka dia izay no atao hoe vehivavy tafita. Izay no fandraisako azy tamin’izany.
Nofehezina be aho tamin’izany satria vavy tokana. Tsapako tao anatiko nefa hoe tsy tiako ilay fehezina. Fa taty aoriana vao fantatro hoe izay mihitsy ny maha izaho ahy : tsy tia terena, tsy tia fehezina.
Izaho manokana dia mahita fa betsaka ny zavatra tsy ampy tamin’ny fanabeazana ahy. Tsy manome tsiny ny ray aman-dreniko aho satria tsy mitovy ny vanim-potoana niainan’izy ireo sy izaho. Izay fantany sy nitaizana azy no nampianariny ahy.
Tamin’ny alalan’ny Kung Fu no nahafantarako zavatra be dia be, ny tokony halehako sy ny tsia. Izany hoe ny Kung Fu no tena nitaiza ahy nanomboka izaho 8 taona. Betsaka ny zavatra nataoko tamin’ny mbola kely fa ny haiady (arts martiaux) ihany no ataoko hatramin’izao ary izaho irery no naharitra tao taminay 5 mianadahy satria tena tiako ilay izy.
Izany hoe tsy feno fa sombiny ihany no azo tany amin’ny ray aman-dreny. Izany indrindra no anisany anton’ny nanoratako ilay boky « Izay voleko no hotazako » izay miompana amin’ny fanabeazana.
V : Tsy mifanipaka amin’ny maha-malagasy ve ny Kung Fu ?
XZA : Ny Kung Fu no anisany nampitana ny fahendrena malagasy tamin’izany fotoana izany. Rehefa niverina teto Madagasikara i Grand Maître Pierabe dia naniry ny hampianatra ny atao hoe filozôfia malagasy. Fantany anefa fa tsy liana amin’ny fahendrena malagasy ny Malagasy dia nampiasainy ny Kung Fu nampitana azy. Vokany : nahazo mpianatra 2000 vetivety izy. Dia nozarainy tsikelikely tao ny fahendrena malagasy, ny fampivoaran-tena sy ny fivelaram-panahy.
Tao no nampianarana ahy hoe ny Kung Fu dia fiainana ary io ilay fampivoaran-tena. Hitako mihitsy hoe ny traikefa niainako sy ny Kung Fu dia tena nampivoatra betsaka ahy.
Ny Kung Fu no tena nitaiza ahy cc: Amour Rakotomalala
V : Ankehitriny, lasa mpanabe eo amin’ny sehatra maro ianao indrindra eo amin’ny fampivoaran-tena, inona no nanosika anao hanao izany ?
XZA : Nanapa-kevitra ny nampianatra aho ary efa tonga ihany koa ny fotoana tamin’izay satria nahazo ny mari-pahaizana « Sifu supérieur » tamin’ny Kung Fu aho, izay nanamarika fa raiamanandreny aho nanomboka teo. Tamin’ny voalohany, na izaho aza gaga hoe maninona no mahita avaly ny fanontanian’ny ankizy foana aho, toa haiko ilay izy. Dia vao mainka nampirisika ahy hiroso lalindalina kokoa tao anatin’ilay sehatra izany. Dia nanenjika namonjy izao karazana kônferansa rehetra izao aho, ary niresaka tamina karazana olona maro na mivantana izany na any amin’ny aterineto. Dia lasa nisy niantso aho, lasa nanao « thérapie » na ireny fitsaboana olona manana olana ireny. Lasa asa fivelomako ny manao « coaching ». Tiako, lasa fiainako isan’andro ihany koa ilay manao fizarana.
« Tsy afaka hamantatra ny olona mihitsy aho raha tsy mahafantatra ny tenako aloha ».
Xena Zen Aom (Amour)
Noho izany ny zavatra niainako no nakako lesona sy nahafantarako ny rafitra misy ao anatin’ny olombelona sy ny fomba fizotry ny fiainana. Io no ampihariko amin’izay olona manatona ahy. Mila tsapako izany aloha ilay zavatra tsapan’ilay olona dia avy eo mora amiko ny manome torohevitra azy.
V : Inona no foto-kevitra ijoroanao na teny manentana anao eo amin’ny fiainana ?
XZA : Voalohany,
« Tsy misy na iza na iza manana alalana manambany ahy sy manimba ny foko »
Izany hoe mihatra amin’ny rehetra io hafatra io : aza avela misy manimba anao izany, na iza na iza eo amin’ny fiainanao. Ary ity ny faharoa :
« Rehefa miova aho dia miova izao tontolo izao »
Izaho aloha no jiro dia mitondra fahazavana ho an’ny olona. Tsy izaho mihitsy no handany andro andeha hitsoka ny jiron’olona fa ny handrehitra azy ary no hataoko.
V : Mba zarao aminay ny zavatra vitanao na niainanao mampirehareha anao ka tianao ho ohatra ho an’ny hafa !
XZA : Raha ny eo amin’ny sehatry ny fampivoaran-tena fotsiny no resahako dia isan’andro, efa mila ho 200 farafahakeliny ny hafatra voaraiko ao amin’ny Facebook manontany torohevitra sy fanampiana. Raha ny olona nihaona tamiko mivantana dia miisa 35 eo farafahakeliny ny olona saika namono tena fa niova hevitra rehefa avy niresaka tamiko satria nahatsiaro izy avy eo hoe misy dikany kay ny fiainana.
Faly aho satria tsapako hoe ilaina aho ary fantatro fa anisany antom-pisiako goavana iray izay.
V : Hafatra ho an’ny mpamaly ny blaogy ary !
XZA : Mila mifoha ianao ! Mila mamantatra tsikelikely hoe hatraiza ny zavatra takatrao sy zakanao, indrindra eo amin’ny saina sy ny fo. Ny fampivoaran-tena dia tokony ampiharina tsikelikely eo amin’ny fiainana. Noho izany, mila mahay mamaky sy mandinika ny fiainana efa nandalovanao : fantarina ny antony sy ny lesona azo tsoahina. Dia avy eo, jereo ny fivoaranao isan’andro. Fanampin’izany, mila misokatra ara-tsaina ihany koa. Ekenao ny maha ianao anao dia ho mora aminao ny mandray ny hafa.
Mety hoe tsy teto amintsika no niantombohan’ilay hoe « fampivoaran-tena » saingy zavatra efa ataon’ny olona isan’andro io fa mety tsy fantany fotsiny. Dia eo no mila tairina kely ny olona hoe « mifohaza ry Gasy ! »
Miantomboka amin’ny andry dimy ny fampivoaran-tena : vatana, saina, fanahy, fiarahamonina ary toekarena. Asiako teny kely ilay resaka toekarena ohatra. Eo amin’ny asa fivelomana, aza mionona amin’ny zavatra iray satria mety hisy fotoana ianao ho leo na koa hikatona tampoka sanatria ny orinasanao. Noho izany, mila mahay zavatra betsaka.
Izaho ohatra, betsaka ny asa fivelomako : Coaching en ligne na mivantana, thérapie, fanaovana kônferansa, fampianarana Kung Fu, fanaovana mofomamy… Tao anatin’ny 6 taona izay, izany hoe tao anatin’ny tena fivelarako, dia tsy manaiky mihitsy aho raha tsy manao zavatra. Amin’izao fotoana izao, raha misy iray tsy dia mandeha amin’ireo, ny resaka ara-bola io, dia misy iray afaka mameno azy.
Mbola betsaka ny hafatra nampitain’i Xena Zen Aom fa aleo aloha ajanoko eo ny anio. Inoako fa efa misy azo tsakotsakoina sy ampiharina ireo. hotohizako indray amin’ny manaraka !
fampivoaran-tena, fampivoarana ny maha-olona, izay voleko no hotazako, kung Fu, Kung Fu Malagasy, Rakotomalala Amour, vehivavy malagasy, Xena Zen Aom